Daraasadda Kiiska - Unbxd | IOS iyo Android SDK - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Daraasad Xaalad: Unbxd
Unbxd SDK ee iOS iyo Android
Unbxd waa bilow hindi ah oo bixisa goob goobid iyo madal shaqsiyaynta oo caawisa ecommerce shirkadaha si ay uga qaybgalaan macaamiishooda websites. Waxay siisaa agabka ay u baahan yihiin baayacmushtarleyda iyo baayacmushtarka si ay uga caawiyaan macaamiisha inay helaan waxay ka raadinayaan ecommerce websites. Xalkeeda waxaa hadda isticmaala in ka badan 150 macaamiil ah oo ku nool 40 waddan si ay khibradda wax iibsiga ee internetka uga dhigaan mid u wanaagsan isticmaalkooda
Macmiilku wuu u baahnaa Android iyo IOS SDKs oo ay isticmaali karaan isticmaalayaasha Unbxd si ay ugu dhexgalaan mCommerce apps SDK-ka ayaa markaa loo isticmaali karaa in lagu daro sifooyinka ay bixiso Unbxd - Isdhexgalka Goobidda, Analytics iyo Talobixin toos ah.
Astaamaha ugu muhiimsan kuwaas oo NewGenApps fuliyey waxay kala yihiin:
Raadinta Isdhexgalka: Unbxd SDK wuxuu awood u leeyahay hagaajinta raadinta shabakaddaada e-commerce iyo apps mobile (Android ama iOS). Raadinta goobtu waxay la socotaa astaamo faa'iido leh sida Autosuggest, Shaandhaynta, Higgaad-hubinta, iyo kuwo kale oo badan kuwaas oo ka caawiya macaamiishaada deegaan gaar ah oo ay wax ku iibsadaan.
Analytics: Unbxd Analytics la socda dhacdooyinka booqdayaasha sida raadinta hits, gujisyada alaabta, dalabaadka, iwm. ee abkaaga. Waxa kale oo ay la socotaa booqdayaasha oo ay aqoonsato booqashooyinkooda soo noqnoqda. Macluumaadkan ayaa markaa la isku geeyaa, la falanqeeyaa, waxaana loo adeegsadaa: soo saarista warbixino faahfaahsan, bixinta natiijooyinka raadinta habboon.
Gawaarida Gawaarida: Autosuggest waxay u oggolaaneysaa martidaada inay si toos ah uga helaan alaabada aasaasiga.
SDK ee labada iOS iyo Android dhawaan ayaa lagu sii dayn doonaa GitHub sida ilo furan. Waxaan si adag u aaminsanahay in SDK -kan uu u fududayn doono adeegsadayaasha Unbxd inay dhisaan apps mobile iyada oo si sahlan loo raadinayo iyo shaandhaynta shaqaynta iyo qabashada Analytics ka fiican.